Izindaba - Siyini Isizathu Sokukhala Kwezinjini Zenjini?
Shayela Us Namuhla!
ama-injini wenjini yaseMelika
ama-valve enjini eCummins
ama-valve enjini ye-Caterpillar
ama-valve enjini kaJohn deere
ama-valve enjini eDetroit
ama-valve enjini yenjini yaseJalimane
ama-valve enjini eMercedes Benz
Yini Imbangela Yokukhala Kwezinjini Zenjini?
Uyini umsindo we-valve?
Ngemuva kokuqalwa kwemoto, injini yenza “ukuchofoza” okunesigqi okufana nomsindo wensimbi ongqongqozayo, oshesha ngesigqi njengoba ijubane lenjini lenyuka. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, injini ngeke yenze lolu hlobo lomsindo isikhathi eside. Iningi lemisindo lenziwa isikhashana ngemuva kokuqala okubandayo bese linyamalala kancane. Lona umsindo we-valve.
Yini imbangela yokukhala kwe-valve?
Isizathu esiyinhloko sokukhala kwe-valve yisikhala esenziwe phakathi kwe- injini valve izindlela, iningi lazo kungenxa yezingxenye zokugqoka noma ukwehluleka ukulungisa ukulungiswa, njenge-camshafts, rocker arms, kanye ne-hydraulic jacks.
Iningi lezinjini manje selisebenzisa ama-hydraulic jacks, asetshenziswa ikakhulu ukulungisa ngokuzenzakalela igebe elibangelwe ukuguga komshini we-valve. Ukulungiswa okuzenzakalelayo kwamajack we-hydraulic kutholakala ngokucindezela kukawoyela. Lapho izingxenye zigugile ngokweqile futhi zeqa umkhawulo wokulungiswa okuzenzakalelayo, umsindo we-valve uzovela. Ukuhluleka kwekholomu ye-hydraulic jack kanye nokwehluleka kokusebenza kokulungiswa okuzenzakalelayo nakho kungadala ukuthi i-valve ikhale.
Ukwehliswa ngokweqile kwe-valve, ngaphezu komsindo lapho uqala (kucace bha lapho imoto ibanda), kunezinye izingqinamba. Okufana: nokuphakama kwevelufa okunganele, ukudla okunganele, ukukhipha okungaphelele, amandla enjini ancishisiwe, kanye nokusetshenziswa okuphezulu kukaphethiloli.
Njengoba uhlobo lwemoto ngalunye lwehlukile, izidingo zokuvalwa kwe-valve nazo zehlukile. Ngokuvamile, ukususwa okujwayelekile kwe-valve yokudla kuphakathi kwezintambo eziyi-15-20, kanti imvume evamile ye-valve yokukhipha iphakathi kwezingcingo ezingama-25-35.
Buyini ubudlelwano phakathi komsindo we-valve namafutha enjini?
Njengoba umsebenzi wokulungiswa kokuzenzakalela wejack hydraulic utholwa ngumfutho kawoyela, umsindo we-valve unobudlelwano obuqondile namafutha. Yiqiniso, okushiwo ukuthi injini ayigqokile.
1. Uwoyela ophansi noma ivolumu kawoyela enganele
Umfutho ophansi kawoyela, ukuthambisa okunganele kwegumbi le-valve; noma uwoyela onganele, nezikhala ezikujeke wokubacindezela lapho umoya ungena ephaseji kawoyela, kuzodala umsindo we-valve.
2. Umoya ungena ephaseji kawoyela ngesikhathi sokulungiswa
Abantu abaningi banalolu hlobo lwesipiliyoni. Basanda kuqeda ukugcinwa, futhi kwaba nomsindo wesikhashana we-valve lapho ukuthungela kwakukhona ngosuku olulandelayo. Eqinisweni, lesi simo sijwayelekile, ngoba ngesikhathi sokukhipha uwoyela ephaseji kawoyela, uwoyela ophasejini uyachitheka, futhi umoya ungangena ephaseji likawoyela kudale umsindo we-valve. Ngemuva kwesikhathi sokusebenza, umoya uzokhishwa futhi umsindo we-valve uzonyamalala.
3. Ama-carbon more deposits enjinini
Ngemuva kokuthi injini isetshenziswe isikhathi esithile, imali ekhishwa yikhabhoni izokwenzeka ngaphakathi. Lapho i-carbon deposits iqoqa iye ezingeni elithile, izindima zikawoyela zingavinjelwa, kubangele ukuthi umsebenzi wokulungisa igebe othomathikhi wejack hydraulic wehluleke futhi ubange umsindo we-valve.
Ungawugwema kanjani umsindo we-valve?
Ukugwema ukukhala kwe-valve empeleni kulula kakhulu. Umnikazi wemoto udinga kuphela ukugcina ngesikhathi ngokuya ngezidingo zomkhiqizi ukuvimbela ukugqokwa kwenjini, okunganciphisa ngempumelelo ukuvela kwalesi simo. Kubaluleke kakhulu futhi ukukhetha uwoyela wenjini olungele ibanga lenjini kanye ne-viscosity yemoto yakho, futhi ungaphishekeli ngobumpumputhe uwoyela wezinjini ezisezingeni eliphakeme nophansi.
Izwe laseWuji, iShijiazhuang Idolobha, Isifundazwe saseHebei, eChina
ama-valve wenjini yenjini yasejapan
ama-injini wenjini yaseKorea
Januwari-28-2021 Yini Imbangela Yokukhala Kwezinjini Zenjini?
Januwari-28-2021 Yiziphi Izinzuzo Zesistimu Yesikhathi Sokuguquguquka Kwevelufa Eguquguqukayo?
Januwari-28-2021 Ungabhekana Kanjani Nokwehluleka Kwe-Valve?
Januwari-28-2021 Ungayikhipha Kanjani I-Valve Yenjini Yemoto?